Basket 3 x 3 Malagasy Nandalo tao Nairobi Kenya
Barean’i Madagasikara Tokony hahazo 2 miliara ariary, raha kely indrindra
Ho fanatsarana ny tontolon’ny baolina kitra aty afrika dia fanapahan-kevitra noraisin’ny avy eo anivon’ny kaonfederasionina na ny CAF ny hanolotra lelavola mitentina 600.000 dolara na 2 124 000 000 ariary avy ireo ekipam-pirenena miisa 24 handray anjara amin’ny tompondakan’i Afrika izay atao any Ejipta ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay izao.
Tsipy kanetibe Malagasy Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Federasiona Malagasy
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny mpikambana ao amin’ny FMP “Federasiona Malagasin’ny taranja Tsipy kanetibe tarihan’ny filohany Beryl Razafindrainony
Tenisy ambony latabatra Manoman-tena mafy ny Malagasy
Hanana solontena 2 ny Malagasy amin`ny fiadiana ny tompondaka erantany eo amin’ny taranja tenisy ambony labatatra hatao ny 21 hatramin` ny 28 aprily izao,
Fizaram-bondrona-CAN 2019 Tafaraka amin’i Nigeria i Madagasikara
Tontosa omaly tany Egypte ny antsapaka amin’ny fizaram-bondrona ho an’ny CAN 2019 .Ao amin’ny vondrona B no misy ny Barea, ekipam-pirenena Malagasy izay tafaraka amin’i Nigeria, Guinée ary i Burundi.
Ny zoma 2 novambra lasa teo no niala teto an-tanindrazana ny delgasionina Malagasin’ny taranja basikety 3 x 3 hiatrika ny Afrobasket 3 x 3 2018 any Lomé Togo
manomboka ny 9 ka hatramin’ny 11 novambra izao. Rina Randrianarisoa tompon’andraikitry ny « commission du basketball de masse » ao amin’ny Fmbb no mitarika ny delegasiona izay ahitana mpilalao 4 mirahalahy : Manimison Fabrice Constant sy Luobacky Rick Ley « Ricky » samy mpilalaon’ny Gnbc, Livio Ratianarivo mpilalaon’ny Ascb ary i Arnold Solondrainy mpilalaon’ny 2Bc Vakinankaratra. Ny alahady sy alatsinainy 4 sy 5 novambra ity delegasiona ity no nandalo sy nitoetra fotoana fohy tao Nairobi Kenya va nihazo an’i Lomé Togo. Marihana fa ao amin’ny vondrona B miaraka amin’i Togo sy Burkina Faso no misy an’i Madagasikara.